• The African Aviation Tribune •: ► ZIMBABWE: FreshAir unveils logo, begins offering flights from USD$50 up.
► ZIMBABWE: FreshAir unveils logo, begins offering flights from USD$50 up.
Zimbabwean aviation blog, Harare Airport Blogger, reports that private Zimbabwean start-up LCC, FreshAir, a 51/49 joint venture between Nu.Com (Pvt) Ltd of Zimbabwe and 1Time Holdings Ltd of South Africa, has unveiled its logo and has begun to advertise for routes between Harare, Bulawayo, Johannesburg and Victoria Falls with flights costing from USD50. Its website however - http://www.fly-fresh.com - is still under construction.
FreshAir Zimbabwe's logo (HarareAirportBlogger)
Launched on 4 August of this year, the airline is set to start operations in the coming weeks using a McDonnell Douglas MD-87 and an MD-83, though with co-partner 1Time (T6) in the financial doldrums following heavy losses over the past year, it is unsure how the deal will proceed given that 1Time has already axed its Johannesburg - Mombasa route.
Labels: 1Time, Bulawayo, FreshAir, Harare, Johannesburg, South Africa, Zimbabwe